LALAO RAVALOMANANA : Vonona hitarika amin’ny fiainam-baovao – MyDago.com aime Madagascar
LALAO RAVALOMANANA : Vonona hitarika amin’ny fiainam-baovao
Tonga nanotrona ny hetsika nokarakarain’ny Vondrom-bavaka miasa miaraka amin’i Neny Lalao Ravalomanana tao amin’ny lapan’ny tànana Arivonimamo ny Zoma 19 Jolay 2013 Ramatoa Lalao Ravalomanana sy delegasiona niaraka taminy nahitana ny filoha lefitry ny Cst Razafimanantsoa Hanitra, ny Cst Rodin Rakotomanjato. Nanao asa soa fitiliana ny fahasalamana sy fitsaboana maimaimpoana ary didim-poitra faobe tao Arivonimamo ireto VMNR ireto. Rehefa vita izany dia nitafa tamin’ny mponin’Arivonimamo tao amin’ny tranompokonolona i Neny . Misaotra an’Andriamanitra isika hoy izy fa androany ny fotoana nomeny mba hifanatrehantsika tava. Misaotra an’Andriamanitra ihany koa noho ny fitrotronareo am-bavaka anay mianakavy. I Neny no tonga eto fa i Dada hoy izy nampitondra ny hafatra hoe mandrampihaona tsy ho ela hono . Mbola nanafatra koa izy hoe mivavaha ka aza mitsahatra fa ny vavaky ny marina dia mahery indrindra. Rehefa nijery ny manodidina an’i Madagasikara aho hoy Lalao Ravalomanana dia nahita fa mijaly ny vahoaka Malagasy. Tonga eto Arivonimamo ny tenako satria ny reny tsy mahafohy zanaka ka dia tonga mijery anareo akaiky aho androany. Misaotra indrindra ireo vondrom-bavaka amin’ny fiaraha-miasa ary mijery indrindra ny olana mianjady amin’ny fianakaviana tsirairay eo amin’ny lafiny fahasalamana. I Neny hoy izy dia olon’ny finoana ary vonona ve ny vahoakan’Arivonimamo hamela heloka , hiara-hiasa hoy ny fanontaniana napetrany. I Neny koa vonona hitsinjo ny tokantrano tsirairay avy ary isika vehivavy mba ampiditra an-tsekoly daholo ny ankizy. Mba hananana vatana sy saina mavitrika dia ataontsika ny “ cantine scolaire”. Izany anefa hoy izy dia mila antsika rehetra hifanome tànana sy ny hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Amin’ity kosa isika dia hijery ny fandrosoan’ny tokantrano tsirairay avy, nefa tsy ara-nofo ihany fa indrindra ny ara-panahy. Ataontsika laharam-pahamehana ny fanabezana ny olona ho tia ny namany. Ho avy I Neny hampianatra antsika izay atao. Andrimanitra no mialoha làlana ary Jehovah no ataontsika ampinga. I Neny hoy izy dia vonona hitarika antsika amin’ny fiainam-baovao satria isika matahotra an’Andriamanitra amin’ny fiahiana ny tenantsika. Misaotra amin’ny fahavononana ary vonona isika hanorina fiainam-baovao mba hananan’ny vahoaka fiainana matahotra an’Andriamanitra, fiainana tia ny namany, hijery ny madinika. Mandalo aho androany hoy Lalao Ravalomanana ka ampitao amin’ny olona any an-trano. Rehefa manana fiainana miaraka amin’Andriamanitra dia tena ny tenin’Andriamanitra no iainana ary fankatoavana izany dia tena manana ny fanahy masina isika ao anatintsika ao. Rehefa mandray azy tamin’ny fo no hahazoana fahamarinana, amin’ny vava no hahazoana famonjena. Manantena ny vahoakan’Arivonimamo handray an’I Jesoa mpamonjy. Mandalo fotsiny aho fa mifalia amin’ny fanantenana , matokia an’Andriamanitra hoy izy.Rehefa vita ny hetsika dia niantsena tao amin’ny tsenaben’Arivonimamo i Neny nividy ny vokatry ny tantsaha sy ny taozavatra Malagasy, ary dia nitafa mivantana tamin’ireo mponin’Arivonimamo ny tenany.
Auteur Solo Razafy*Publié le 19 juillet 2013 19 juillet 2013 Catégories Politique
10 pensées sur “LALAO RAVALOMANANA : Vonona hitarika amin’ny fiainam-baovao”
Izay izany e!
19 juillet 2013 à 19 h 29 min
Tandremo ihany ry Neny ny manafangaro be loatra ny fivavahana sy ny politika. Ny fivavahana dia tsy mifandrindra loatra @ politika satria ity farany dia resaka ambadika sy hafetsifetsena goavana isan’andro isan’ora, nefa ny fivavahana dia ny mifanohitra @ izany!
Ny fivavahana dia fitaizana ny fo sy fanahy ary ny politika dia fitaizana ny ekonomika, kolotoraly, sosialy sy fampianarana ka matetika dia mifanipaka be ireo na dia tokony hifameno aza. Izay no nahatonga an’i jesosy niteny hoe aloavy an’i kaisara izay an’i kaisara ary an’Andriamanitra izay an’Andriamanitra.
Ny paradisa dia toa tsy @ alalan’ny politika no ahatanteraka azy fa @ alalan’i Jesosy sy Andriamanitra @ ara-panahy. Ny politika dia misahana ny fiainanan’izao tontolo izao fa ny fivavahana kosa dia misahana ny ara-panahy sy ny famonjena ka sao dia diso fijery sy tanjona ry Neny fa tsy ahova fo sy fanahy direct @ politikam-pivavahana fa indrindray aza vao maika loza no miseho (ohatra ny silamo extremiste lasa manaonao foana sy loza amin’atambo nefa nikezaka hampanjary ny fahefa’Andriamanitra ety an-tany hono no tanjony)
Ny Filamatr’i NENY dia : » Ho an’ANDRIAMANITRA ,ho an’ny FIRENENA « ..
Izany hoe: »HANOMPO AN’ANDRIAMANITR SY HIASA HO AN’NY TANDRAZANA SY HO AN’NY MPONINA I NENY! »
IZANY NO HATAO HOE : »FINOANA MIARAKA AMIN’NY ASA ! »
MAHAZOTOA ARY MAHAVITA BE R’I NENY !
Nous allons démontrer à la Communauté internationale que c’est le peuple qui a besoin de Neny Ravalomanana comme Présidente selon Feno Imanoela qui a déclaré que les actes de la Communauté internationale sont contraires à la démocratie
DIA MIHEVITRA VE ISIKA FA HO HENON’ny communaute internationale ny kabary nareo .ho lany andro @ fanalavana ny tetezamitya fotsiny eo .
Mihaino foana ireo fa raha tsy izany efa potika efa ela ny firenena , ireny no marika fa mbola misy tia ny tanindrazany fa tsy mitovy @ ireo taranaka « FOZAORANA »
aiza de variana loatra any @ FJKM ry Neny fa jereo ihany koa ny zanaka sy ny zandry hafa toy ny katolika sy ny fiangonana hafa. Mba miandry anao ihany koa izy ireny @ famelomana ny fanantenana satria efa kivy @ asan’ny foza. Mirary soa
20 juillet 2013 à 4 h 30 min
Roviana nga hajo no mba hisera @ vahoaka madinika ohatra itony. De ho gaga ialahy. Mipao-tsatroka @ nao za ry Neny @ fanentre-tenanao. Ny Tompo homba anao hatrany. Fa Andriamanitra tsy andrin’ny hafa andrinay ihany.
I NENY dia toa an’i DADA iany : Hazo avo ka halan’ny rivotra. Ela be aho no tsy teto ary gaga noho ny fahatongavan’i NENY. Mahareta isika vahoaka malagasy fa tsy maintsy handresy ny tolona na ho ela na ho aingana satria i Lavasanga sy ny mpamoky azy dia tsy maintsy hiaran’ny « retour de bâton ». Eto isika hijery, misy farany daholo ny zava-drehetra fa mahareta ry mpiray tanindrazana malala.
Fa angaha dia tany anaty ala mihintsy ry tony, no dia tsy nahafantatra hoe efa tonga i neny, ary nasain’ny mpanongana nandohalika mihintsy vao nahazo nitsidika ny reniny izay narary mafy â ?
Olona tsy nanao inona na inona dia tsy avela mody an-tanindrazana satria hoe vadin’ny Filoha Ravalomanana !
Satria hono niaran’ny sazy ny Filoha ! Sazy inona ary fitsaràna mba manan-kery ve ?
Mba fisainan’inona hoy ianao no mahavita izany ? Na ny alika aza tsy sahy hanao an’izany !
Avelako kely aloha ianao fa mbola hanao asabotsy mahafinaritra ny akam, ary manantena ny hahita endrik’olona iray izay !
Asabotsy mifankahita ??? MDR
Précédent Article précédent : Lalao Ravalomanana : Nanatrika ny famaranana ny isan-kerintaonan’ny Synodam-paritany Afovoany Andrefana
Suivant Article suivant : MANANDAFY RAKOTONIRINA : Ny fandresena vazaha dia ny fandresin’i Neny